Izindwangu zangaphansi → okokusebenza • Imishini efekethisiwe yekhompyutha ye-P & M
Izimpahla zangaphansi ezishisayo inikezelwe ikakhulukazi kubantu abavezwe kakhulu yizimo zangaphandle ezinzima, njengamazinga okushisa aphansi, umoya noma okusalungiswa. Iningi lezinhlobonhlobo zesitolo yizimpahla zangaphansi ezishisayo: Izikibha, izikhindi zangaphansi namasethi. Izimpahla zangaphansi ezisebenzisekayo zenziwa ngokususelwa kumazinga asebenzayo.
Izembatho ezenziwe ngale ndlela ziqinisekisa inkululeko yokuhamba nenhlalakahle engcono. Ngenxa yalezi zici, ayisetshenziswa kuphela emsebenzini, kepha futhi ngabathandi bezemidlalo basebusika. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo esiyinikezayo iyatholakala ngamanani ancintisanayo ngenxa yezindleko esizi-oda esitolo sethu. Ukuhlanganiswa kwekhwalithi ephezulu nentengo ekhangayo kwenza ukuthi izingubo zangaphansi ezinjalo zithandwe kakhulu hhayi kuphela ngezidingo zobuchwepheshe kepha nezizimele.
Izindwangu zangaphansi ezisebenzisekayo zilungele kahle umzimba
Izimpahla zangaphansi ezisebenzisekayo, isethi yamahembe angaphansi namabhulukwe
Izingubo zangaphansi iguquguquka kakhulu, ilingana kahle nenani. Ukulingana kwayo kukhululeke kangangoba ngemuva kwesikhashana uyigqokile, uyeka ukuyizwa. Izinto eziguquguqukayo ziqinisekisa inkululeko yokuhamba, ukuvimbela noma yikuphi ukwesaba ukungakhululeki. Kodwa-ke, umsebenzi omkhulu wezingubo zangaphansi ezinjalo ukuvikela impilo nomzimba ekushiseni okuphansi nasekupholiseni komzimba.
Izimpahla zangaphansi ezishisayo zisheshe zathola ukuzwelana kwazo nabathandi bezemidlalo kanye nosomabhizinisi, izakhiwo zayo zamukelwa kahle, okwandisa ukuthandwa kwayo. Kuhlanganiswe nezinye izingubo ezifana sweatshirts, ibhulukwe noma amajakethi ikuvumela ukuthi ulawule ukushisa komzimba ezimweni eziguqukayo.
Iqoqo lezimpahla zangaphansi ezishisayo, ezimnyama. I-PLN 38,69 isiyonke
Ukususwa okuphumelelayo komswakama
Izimpahla zangaphansi ezishisayo yakhelwe kusetshenziswa ubuchwepheshe bamuva. Babhekene ikakhulukazi nokunethezeka okugqokile okuhlukile. Ngenxa yokususwa komswakama kuzendlalelo zangaphandle, zilungele izimo lapho umsebenzisi akhombisa khona ukukhuphuka komzimba.
Umswakama ukhishelwa ezingqimbeni ezingaphandle, okubaluleke kakhulu uma kuba nokuvivinya umzimba kakhulu. Ukusakazwa okufanele komswakama kunciphisa ubungozi bephunga elibi.
Ukugcina ilineni lihlanzekile kulula kakhulu, akudingi izindlela ezikhethekile noma ama-ejenti wokuhlanza azinikele, vele ulandele imithetho elula kwilebula lomkhiqizo maqondana nezimo zokuwasha.
Izimpahla zangaphansi ezisebenzisekayo, amabhulukwe eBrubeck
izingubo zangaphansi zabesilisailineni lomsebenziizingubo zangaphansi zomsebenzi zabesifazaneizingubo zokusebenza ezishisayoizingubo zangaphansi ezisebenzayo ezishisayoilineni lomsebenzi ofudumeleizingubo zokusebenza zangaphansi ezishisayo